Myanmar Gays Heaven: Mcc GrMi
top ပါ မနွဲ့တဲ့သူများစိတ်ဝင်စားရင် pan827lay@gmail.com ကိုအပ်နိုင်ပါသည်
Posted by Myanmar Gays Heaven at 10:27 AM
အသက်ကြီးသော မနွဲ့တဲ့ bot တွေနဲ့ဆုံချင်တယ်၊ ၄၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်း bot များသာ
စိတ်ဝင်စားရင် gmail or ph ထားခဲ့ပေးပါ။
ကိုယ့်အသက်က ၄၁ ပါ အလုပ်နဲ့ တည်တည်တံ့တံ့နေနေတာပါ.. ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းနေတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး.. bot ကိုဆန္ဒရှိနေပါတယ် ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသော Top များနဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်.. ကိုယ့်လိပ်စာက ဒီမှာ ထားခဲ့ရတာ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူငယ်ချင်းကို ဆက်သွယ်လို့ရမဲ့ အဆက်အသွယ် တစ်ခုခုပြောထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဆက်သွယ်ပါမယ်.. တခြား သီးသန့် private ပြောလို့ရတဲ့ site တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင် ပြောခဲ့ပါ.. ကိုယ်လိုက်လာပေါ့မယ်..
Anonymous May 9, 2014 at 10:41 PM
Anonymous May 16, 2014 at 2:58 AM
Manjam Site ကိုသုံးလားဗျ အဲဒီ site မှာ ကျနော့်အကောင့်က yangonshan ပါ အဲဒီကိုစာပို့ထားနိုင်ပါတယ်..
kyawkyaw oo May 28, 2014 at 10:39 PM
oo kyawkyaw22@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ
၄၀ ​ကျော်​ ၅၀ ​တွေကိုစိတ်​ဝင်​စားတယ်​ လိုး​ပေးချင်​တယ်​ fb အ​ကောင့်​ထားခဲ့မယ်​ စိတ်​ဝင်​စားရင်​addပါ www.facebook.com/hlaing.min.100
Anonymous March 7, 2015 at 6:29 AM
to contect by sms09975777387
botများကို လိုးချင်သည် ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ အလကားလိုးပေးပါမည်
အခုတောင်ချချင်နေပြီ ygn bot viber သုံးလား ခံမယ်ဆို confirm လုပ်ပါ
kyalsin moe July 30, 2016 at 7:15 AM
thomas April 23, 2014 at 7:15 PM
aung gyi June 17, 2014 at 12:50 AM
aung gyi June 17, 2014 at 12:55 AM
Aung Lwin Oo December 1, 2014 at 12:18 AM
Ko aung gyi ကျ​နော်​ အီး​မေး aunglwin.alo@gmail.com ဆက်​သွယ်​ပါ
soe moe July 31, 2014 at 12:44 AM
ကျနော်က ၂၃ အဆင်ပြေလား ဖုန်းဆက်ပါလား မနွဲ့ ရင် ဖြစ်ကြည့်ချင်တယ် 0932353670 တကယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်
တကယ်လား လီးကိုကောင်းကောင်းစုပ်ချင်တယ် ဖင်လဲလိုးပေးမလား ကျားစစ်စစ်ပါ စမ်းကြည့်ချင်လို့
chit oo February 21, 2015 at 8:10 AM
nyiko March 21, 2015 at 6:24 PM
ygn က bot တွေ
နေ ရာ ရှိ ရင် အခု ဆက်ပါ
free လာ လိုးပါတ
ygn295@gmail ပါ။ top များadd ပေးပါ။
chit oo February 21, 2015 at 8:11 AM
09425301542 Top Npt ခံချင်သူဆက်သွယ်ပါ
so good my ph 09402556578 age35ygn,mdy
Anonymous October 12, 2014 at 9:03 PM
Nanda Ko January 13, 2015 at 2:43 AM
09254277988 pls contact to me. I m bot
Anonymous July 16, 2016 at 9:55 AM
viber သုံးလား အရင်ဆွေးနွေးရအောင် သုံးတယ်ဆို အကြောင်းပြန်လေ
Unknown February 21, 2015 at 7:57 AM
crazy man March 10, 2015 at 10:22 AM
Naing Tun April 10, 2015 at 4:13 PM
ရုပ်ချော သော သူတွေနဲ့ Sex ဖြစ်ချင်တယ်
ကျနော်က ၁၉ ပါ T ပါ
Anonymous August 19, 2015 at 2:02 AM
Anonymous April 25, 2015 at 9:58 AM
Chit Chat December 18, 2015 at 5:03 PM
Thura Thwin May 30, 2015 at 10:54 PM
Naing Tun June 27, 2015 at 8:02 PM
mdy T ပါ
ngel lay November 16, 2015 at 9:03 AM
koaungmyo myint March 12, 2017 at 3:46 AM
Chit Chat December 18, 2015 at 5:02 PM
thawngno December 26, 2015 at 1:02 PM
thuyamin May 7, 2016 at 2:58 AM